Madheshvani : The voice of Madhesh - आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाई जनजीवन सहज बनाउनुपर्छ : गंगा पासवान
मेयर, कर्जन्हा नगरपालिका, सिरहा
० कर्जन्हा नगरपालिकामा कोरोना भाइरसको अवस्था के छ ?
— कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्वलाई आतंकित बनाइसकेको अवस्थामा कर्जन्हा नगरपालिका पनि अछुतो छैन । हामीले यो वैश्विक महामारी कोरोनालाई रोकथामका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउँदै आएका छौं । अहिले तत्कालै कोभिड अस्पताल बनाई सञ्चालनका लागि निर्देशन आएको छ, त्यतातिर पनि हामी लागेका छौं । हामीले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य विज्ञहरुसँग छलफल पनि गरिसकेका छौं । सिरहा जिल्लाको अन्य पालिकाभन्दा यो नगरपालिकामा बढी प्रभावित भएको छ । किनभने हाम्रो नगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारबाट आउने धेरै छन् । भारत लगायतका देशहरुबाट श्रमिकहरु जसरी नेपाल फर्किए, उनीहरुमा त्यति संक्रमण देखिएन । तर, जनसमुदायले सावधानी नअपनाउँदा, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डको पूर्ण पालना नगर्दा अहिले समुदायस्तरमा कोरोना प्रवेश गरिसकेको छ । अस्ति मात्रै कोरोनाका कारण एक महिलाको मृत्यु समेत भएको छ ।
० अहिले कोभिड अस्पताल बनाउन लाग्नुभएको छ, पहिला नै यसबारे तपाइँहरुको ध्यान किन गएन ?
— वास्तवमा यो सही कुरा हो कि हामीले प्रत्येक पालिकामा कमसेकम एक–एक वटा कोभिड अस्पताल निर्माण गर्नुपर्दथ्यो । अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ, स्थानीय, प्रदेश र संघ । तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य यस तर्फ ध्यान जानुपर्ने थियो । सुरुवाती अवस्थामा नेपालमा यस्तो किसिमले कोभिड–१९ फैलिन्छ भन्ने आंकलन पनि नगरेको हुनुपर्छ । जब अहिले समुदायमा प्रवेश गर्यो त्यसपछि यसको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ । अहिले संघीय र प्रदेश सरकारबाट कोभिड अस्पताल बनाउने निर्देशन आएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि हामीले स्थानीय तहबाट पनि केही रकम रकमान्तर गर्ने र अस्पताल सञ्चालन गर्ने सोचमा छौं ।
० समुदायमा अहिले जसरी कोरोना फैलियो, सरकारहरु कसरी चुक्यो त ?
— छिमेकी राष्ट्रहरुमा कोरोना भाइरस फैलिरहँदा नेपालमा सुरुमा लकडाउन घोषणा हुँदा हामीले धेरै कडाईका साथ पालना गरायौं । त्यतिखेर वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रमिकहरु पनि फर्केका थिएनन् । सीमामा पनि कडाइ थियो । तर, त्यसपछि लकडाउन खुकुलो हुन थाल्यो र मान्छेले सुरक्षाका मापदण्ड पनि पालना गर्न लापरबाही गर्न थाले । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण र राहतका लागि स्थानीय सरकार लागिरह्यो । भारतमा काम गर्ने श्रमिकहरु सीमा क्षेत्रमा अलपत्र हुँदा म आफै गएर उद्धार गरी हाम्रो नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएँ । सामाजिक दूरी कायम नगर्दा, स्वास्थ्य मापदण्ड नमान्दा कोरोना समुदायमा प्रवेश गर्‍यो । निषेधाज्ञा जारी भइसक्दा कोही पनि घरबाट अनावश्यक ननिस्किनु, निस्किनै परे मास्क लगाई, सामाजिक दूर कायम गरी निस्कनु भन्ने किसिमका जनचेतना पनि जगायौं । हाम्रो नगरपालिकामा किसान वर्गको बाहुल्यता छ । यहाँका जनता हाटबजार जानैपर्ने बाध्यता छैन । किनभने यहाँका किसानले दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरु आफैले उब्जाइरहेका छन् । जुन सामान किन्न बजार जानुपर्छ, ती अवस्तुहरु आफ्नै ठाउँमा उपलब्ध छ । आफ्नै ठाउँबाट किन्यो भने समयको पनि बचत हुन्छ र ताजा खाद्यवस्तु पनि पाउँछन् । यस्ता कुराहरु जनता आफै सचेत हुनुपर्छ ।
० जनसमुदायको लापरवाहीका कारणले पनि कोरोना समुदायमा प्रवेश गर्‍यो ?
— यसमा जनसमुदायको पनि लापरवाही हो । जुन सामान किन्न बजारमा जान्छन्, त्यो सामान त हाम्रा छिमेकीले पनि बेचिरहेका हुन्छन्, त्यसका लागि बजारै किन जाने भन्ने मेरो प्रश्न हो । बजारमा हजारौंको संख्यामा भीड हुन्छ, प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडपको अवस्था आउँछ । यस्ता अवस्थाहरु पनि हामीले देखेका छौं । त्यसकारणले यस्ता समस्याहरु हामीले जनसमुदायमा पनि हेरेका छौं । निषेधाज्ञा गर्दा विरोध गर्नेहरु छन् । हातमुख जोर्नेहरुको अवश्य नै समस्या हुन्छ । तर, सबभन्दा पहिला ज्यान जोगाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व हुन्छ । हामीले राहत वितरण गर्दा जोसँग छ, उसले पनि लिएका छन् । वास्तवमा राहत भनेको त वास्तविक अति विपन्न वर्गका लागि हो ।
० अब कोरोनाबाट कसरी बचाउने त ?
— यो वैश्विक महामारी कोरोनाको अहिलेसम्म कुनै औषधि वा खोप आइसकेको छैन । त्यसले गर्दा यसबाट बच्नका लागि हामी जनतालाई आग्रह गर्छौं कि आफै सचेत हुनुस् । जनचेतना फैलाउनुस्, यो मात्रै एउटा उपाय हो । हामीले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ । हामी सबै उच्च मनोवलका साथ एकजुट भएर लड्नैपर्छ । हाम्रो प्रकृतिले पनि साथ नै दिइरहेको छ । अन्य देशहरुको जस्तो हाम्रो नेपालमा अझै पनि अवस्था भइसकेको छैन । अझै पनि हामी सचेत भएर आफ्ना दिनचर्या चलायौं भने कोरोनाबाट बच्न सक्छौं । अब हामीले कोरोनासँग जिउने बानी बसाल्नुपर्छ । हामी कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने कुराको चेतना फैलाउनुपर्छ ।
० सिरहा जिल्लामा असोज १० गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, यसरी निषेधाज्ञा कहिलेसम्म ?
— निषेधाज्ञाबाट मात्रै हामीले कोरोनाबाट जित्न सक्छौं भन्ने लाग्दैन । अब हामी एक घर एक पीसीआर परीक्षण गरेर संक्रमित फेला परेकाहरुलाई आइसोलेसनमा राख्ने, बाहिरबाट आएकाहरुको कोरोना परीक्षण गर्ने र सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै आफ्नो जनजीवनलाई सहज बनाउँदै लग्नुपर्ने हो । यो कोरोनाका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र धरासायी भएको अवस्था छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनका लागि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाई आफ्नो जनजीवन सहजतातर्फ जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । अब निषेधाज्ञाको औचित्य छैन ।